people Nepal » ‘द नेक्स्ट एजुकेशन कनसल्टेन्सी’को आवरणमा भण्डारी दम्पत्तिको गैरकानुनी गतिविधि ! ‘द नेक्स्ट एजुकेशन कनसल्टेन्सी’को आवरणमा भण्डारी दम्पत्तिको गैरकानुनी गतिविधि ! – people Nepal
Posted on December 25, 2021 December 25, 2021 by Tara Nidhi
शनिबार, पौष १०, २०७८ | काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका भर निर्माण हुने घरका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । स्विकृत नक्सापास अनुसार घर निर्माण गर्नुपर्छ । तर, बानेश्वरस्थित अल्फा बिटा भवनसँगै निर्माण भइरहेको एक भवनले गैरकानुनी रुपमा स्विकृत नक्सापास विपरित गतिविधि गरेको पाइएको छ ।
‘द नेक्स्ट एजुकेशन कनसल्टेन्सीले अवैध रुपमा स्विकृत नक्सा बेगर घर निर्माण गरेको पाइएको हो ।
कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सालीग्राम भण्डारी र उनकी श्रीमती सन्ध्या उप्रेती भण्डारीले महानगरपालिकाबाट ६ तलाको घर बनाउन नक्सा स्विकृत गराएका थिए ।
तर, उनीहरुले गैरकानुनी रुपमा ८ तलाको भवन बनाएको फेला परेको हो । महानगरपालिकाले यसरी गैरकानुनी तवरबाट भवन निर्माण हुँदा पनि नियमन नगरेपछि महानगरका उच्च तहकै कर्मचारीको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।
आफ्नै भवन निर्माणमा समेत करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका महानगरका उच्च अधिकारी सहित कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विरुद्ध यो प्रकरणमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले महानगरलाई स्विकृत नक्सापास अनुसार भवन निर्माण भएको नभएको विषयमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।
संदिग्ध आर्थिक गतिविधिको आशंका !
नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) व्यावसायमाथि संदिग्ध आर्थिक गतिविधि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सोही आरोपमा यसअघि विभिन्न कन्सल्टेन्सीको बैंक खाता रोक्का भएको थियो । २०७६ वैशाखमा सरकारले भण्डारी दम्पत्तिद्वारा सञ्चालित द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले पनि संदिग्ध आर्थिक गतिविधि गरेको अभियोगमा खाता रोक्का गरेको थियो ।
एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ नेपाल बाहिर पुर्याउने यस्ता कन्सल्टेन्सीमाथि सरकारले निगरानी राखेको थियो । यसअघि पुतलीसडक मोडमा रहेको द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले स्थापनाको केही वर्षमै बानेश्वरमा कसरी अर्बौंको महल ठड्यायो भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ ।